बिवाहपछि किन महिलाको हिप बढ्छ ? यस्तो रोचक छ कारण ! – Khula kura
हामीले देखेको तथा भोगेको कुरा हो विवाहपछि महिलाको शरीरमा धेरै परिवर्तन आउँछ । पारिवारिक व्यवस्तताका कारण उनीहरुलाई आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिन सक्दैनन् ।
जसले गर्दा उनीहरुको शरीरमा परिवर्तन आउँछन् । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ ।
साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ ।उनीहरुको शरीर एकदमै मोटाउने तथा हिप एकदमै बढ्छ । आखिर बिहेपछि किन यस्तो हुन्छ त रु उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ? एक सर्वेले के कुराले महिलाको शारीरिक स्वरूपमा परिवर्तन आउँछ ? यसको खोजी गरेको छ ।
यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौ न सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा ठुलो थियो ।
यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठुलो छ उनिहरुलार्इ गर्भवती हुँदा खासै समस्या नहुने बताइएको थियो ।
बिहेपछि महिलाहरु धेरै मोटाउनुको कारण पनि पत्ता लागेको छ । विभिन्न अध्यययनले विवाहपछि महिलाहरु मोटाउनुको कारण पत्ता लागेको हने । बिहेपछि धेरैजसो महिलाहरूको सुत्ने समय र दैनिकी बद्लिन्छ ।
थपिएको जिम्वेबारी बहन गर्दा गर्दै सुत्नको लागि पर्याप्त समयको अभावमा धेरैपटक अनिदो बस्नु पर्ने हुनसक्छ । कम्तिमा ७ घण्टा नसुत्नुको कारणले महिलाहरूको तौल बढ्ने गर्दछ ।
बिहे पछि परिवर्तन हुने जिवनशैली तथा चाहानाका कारण महिलाहरूको शरिरमा हर्मोन तिब्र रुपमा परिवर्तन गराउँछ,जुन तौल बढाउन जिम्मेवार छ ।
प्रायजसो बिहे पछि हाम्रो समाजमा श्रीमान कामका लागि बाहिर जान्छन भने श्रीमती गृहणीको रुपमा घरमै बस्ने प्रचलन रहेको छ। दिउसोको खाली समयमा टेलिभिजन हेर्नु उनिहरुको सामान्य दैनिकी कुरा हो ।
जसबाट उनिहरुको शरिर शारिरिक रुपले निष्क्रिय रहने हुदाँ मोटोपन बढ्छ ।बिहेपछि धेरैजसो महिलाहरुलाई नयाँ वाताबरणमा घुलमिल गर्न असहज हुन्छ ।यसले तनाब बढ्छ र साथसाथै तौल पनि ।
मान्यतया बिहे भएको १-२ बर्षपछि धेरैजसो जोडीहरु सन्तान जन्माउने गर्दछन। महिला गर्भवती हुँदा आउने हर्मोनको परिवर्तन तथा चुस्त पोषणको कारणले मोटोपन बढ्ने गर्दछ।
बिहेपछि पतिको घरमा जस्तो खाना हुन्छ त्यस्तै खाना खानुपर्छ, धेरैजसोले ज्यादा फ्याट र मसलादार खाना खाने गर्दछन , यसले तौल बढाउँछ। बिहेपछि पति र घरपरिवार अनुशारको रुटीन बन्नेगर्दछ । यसकारण महिलाहरु आफ्नो ध्यान राख्ने मौका पाउदैन्न र तौल बढ्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : बच्चा हुर्काउँदा आमा–बुबाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? के–के कुरामा ध्यान दिने?हरेक अभिभावकको चाहना हुन्छ, आफ्ना छोराछोरीले उन्नति गरून्, हरेक क्षणमा सफलता प्राप्त होओस्।
तर सबैको चाहना पूरा नहुन सक्छ। कुनै बालबच्चाा हरेक कुरामा अगाडि हुन्छन् भने कुनै बालबच्चाा सबै कुरामा पछाडि हुन्छन्। आफूले चाहेजस्तो छोराछोरीको प्रगति देख्न बच्चाा हुर्काउँदादेखि नै आमाबुबाको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहन्छ।
आजको प्रतिस्पर्धी युगमा कुनै पनि व्यक्ति उच्च मनोबल, भावनात्मक रूपमा सबल, निडर समाजमा घुलमिल गर्न सक्ने नेतृत्व क्षमता भएको बनाउन बच्चा जन्माउँदादेखि नै आमाबुबा मानसिक रूपमा तयार छन् कि
छैनन् भन्ने कुराले फरक पार्छ।हाम्रो जस्तो संस्कार भएको समाजमा बच्चा जन्माउँदा आमाबुबा मानसिक रूपमा तयार भएको पाइँदैन। कुनैकुनै समाजमा छोराछोरीमा अझै पनि विभेद हट्न सकेको छैन।
बच्चा जन्माउँदा मानसिक रूपमा तयार नहुँदा साना केटाकेटीहरू आधारभूत आवश्यकताको अभावमा हुर्कनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ आमाबुबाले बच्चाहरूलाई समय दिन सकेका हुँदैनन्।
बच्चाहरूसँग बसेर उनीहरूका कुरा बुझ्ने समय आमाबुबासँग हुँदैन त्यसले गर्दा पनि बच्चाको सानो दिमागमा ठूलो असर परिराखेको हुन्छ।बच्चाहरूको विकास राम्रोसँग होओस् भन्ने चाहने हो आमाबुबाले साना नानीहरूलाई समय दिनुपर्छ। उनीहरूसँग बोल्दा आँखामा हेरेर कुरा गरिदिनुपर्छ। उनीहरूको कुरा सुनिदिनुपर्छ।
तर, हाम्रो समाजमा आमाबुबालाई यो कुराको जानकारी छैन।हिजोआज आमाबुबाले बच्चालाई भुलाउन मोबाइल, कम्प्युटर, ट्याब, दिइहाल्ने प्रवृत्ति छ। तर निगरानी नगरी आफ्नै काम लाग्दा सम्बन्ध बिस्तारै बिग्रँदै जान्छ।
बच्चा जन्मिएदेखि नै आमाबुबाले बच्चाको ससाना कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। बच्चाहरूलाई बाहिरतिर घुमाउन लैजानुपर्छ। नयाँनयाँ कुराको बारेमा जानकारी दिँदा पछि गएर बच्चाहरू ती कुरामा जिज्ञासु बन्दै नयाँ कुरा खोजेर पढ्ने हुन्छन्।
बच्चाले स्कुलमा के गरेको छ त्यो कुरामा आमाबुबाले ध्यान दिनुपर्छ। बेलाबेलामा बच्चाको स्कुलमा जाने र उनीहरूले गरेको प्रगति कस्तो छ त्यसको बारेमा बुझ्ने गर्नुपर्छ। मोबाइल, कम्प्युटरमा बच्चाहरूले केके हेरिरहेका छन्, ती कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
छोराछोरीका लागि आमा र बुबा दुवैको बराबर स्याहार र ममताको आवश्यकता हुन्छ। दुई जनाको सन्तुलित स्याहारले मात्र छोराछोरी बलियो, निडर र समाजसँग घुलमिल हुन सक्ने सिप बढाउँछ।
छोराछोरीले हरेक क्षण आफ्ना आमाबुबाबाट केही न केही सिकिराखेका हुन्छन्, त्यसैले आफ्ना बच्चालाई कस्तो कुरा सिकाउने त्यो आमाबुबामा भर पर्छ।
हिजोआज बच्चा हुर्काउँदा एक जनाले मात्र हुर्काउने र अर्को वैदेशिक रोजगारमा या बाहिर जागिरको सिलसिलामा जाने गर्छन्। यस्तो समस्याले बच्चाहरूलाई भावनात्मक समस्या आइराखेको हुन्छ।
उनीहरू एकलोपन महसुस गर्ने र सधैं एक्लै बस्न मन पराउने खालका हुन्छन्। आमाबुबा एक जनाले मात्रा बच्चाका सबै आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने हुनाले बच्चाहरू पछि गएर कुलतमा फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ।
बच्चाहरूलाई जसले हुर्काएको छ, ऊसँगै बढी घुलमिल र आत्मीयता हुने गर्छ। कतिपय आमाबुबाले बच्चाले झगडा ग¥यो भनेर सुधार्ने नाममा आफूबाट टाढा होस्टल राख्ने गर्छन्।
यसो गर्दा आमाबुबासँग उनीहरूको आत्मीयता कम हुँदै जान्छ र सम्बन्ध पनि बिस्तारै पातलो हुँदै जान्छ।साना बच्चाहरू जिज्ञासु हुन्छन्। हरेक क्षण उनीहरूमा नयाँ कुरा सिक्ने जिज्ञासा हुन्छ। त्यस्तो बेलामा आमाबुबाले उनीहरूको हरेक जिज्ञास मेटाउनुपर्छ। उनीहरूले सोधेका हरेक कुराको उतर दिनुपर्छ।
बच्चाहरू सुत्ने बेलामा ओछ्यानमा कथा, कविता सुन्न मन पराउने हुन्छन्, त्यसो गर्दा उनीहरूको भावनात्मक विकास तीव्र रूपमा हुन मद्दत गर्छ। यस्तो कुरा सिकाउँदा पछि गएर अभिभावक बन्दा आफ्ना बच्चाहरूलाई पनि यस्तै कुरा सिकाउँछन्।बच्चाहरूलाई आफ्नो दुःख, व्यस्तता, कठिनाइ कहिले पनि देखाउन हुँदैन।
आफ्नो तरिकाले हल गरेर बच्चालाई हुर्काइयो भने उनीहरूमा सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ।माया–ममता, प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रेरणा, हिंसारहित वातावरणमा हुर्काउने हो भने बच्चामा कुनै पनि शिक्षको तीव्र रूपमा विकास हुन्छ।
हरेक खालको पोषणका साथै बच्चाहरूलाई समयमै खानपान र निद्रा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। बच्चाको विकासमा खानेकुराको धेरै महत्व हुन्छ। उनीहरूको विकासमा सबैखाले न्युटेसन जरुरत हुन्छ।
त्यसैले बच्चालाई चाहिने मात्रामा न्युटेसन पुगेको छ कि छैन भनेर ध्यान दिनुपर्छ। तर जंक फुडबाट भने बच्चाहरूलाई सानैदेखि टाढै राख्नुपर्छ।सधैं भरसक एकै समयमा सुताउने बानीको समेत विकास गराउनुपर्छ।
८ देखि ९ बजेसम्म बच्चाा सुत्ने हो भने बिहान ६ बजेसम्ममा उठ्न सक्ने हुन्छन्।कुनै सानोतिनो गल्ती गरेको अवस्थामा बच्चााहरूलाई गाली गर्नु भनेको उनीहरू आमाबाबुबाट झन् टाढिनु हो। यस्तो बेला हप्काउने, थर्काउनेभन्दा पनि मायाले सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्छ।